Google ichatibvumidzawo kuti tiwane edu maIOS | IPhone nhau
Google ichatibvumidzawo kuti tiwane edu maIOS
Vakomana vanobva kuGoogle vanoramba vachiwedzera huwandu hwemabasa mumashandisirwo akasiyana ayo iine muApp Store. Iyo huru Google application haina kungotipa iyo Google Zvino mubatsiri chete asi zvakare inotibvumidza isu kushandisa iyo application sekunge yaive yekutsvaga injini asi kusiyana nekushandisa yekutsvaga injini kuburikidza neSafari, chishandiso cheGoogle chinobatanidza neese ecosystem yekushandisa iyo kambani yakavakirwa muMountain View ine paApp Store. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, Google ichangobva kuzivisa kuti mumwedzi mishoma tichakwanisa kutsvaga yedu iOS chishandiso kuburikidza neGoogle services
Parizvino muIOS tine sarudzo Tsvaga yangu iPhone kuburikidza iCloud kuti ugone kuwana yedu kifaa nguva dzese chero bedzi sevhisi ichi ichiitwa pachigadzirwa, ingave iri iPhone, iPad kana iPod Kubata. Asi munguva pfupi haisi kuzove yega sarudzo yekutsvaga yedu kifaa sezvo Google ichawedzera imwe sarudzo ichatibvumira kuti tiwane mudziyo wedu. Zviripachena kune izvi isu tinofanirwa kuve nechero Google application yakaiswa pane yedu kifaa, zvikasadaro vakomana veGomo View havazokwanise kuita zvishamiso.
Kana isu takarasa iPhone yedu, iPad kana iPod Kubata uye isu tikasarangarira yedu iCloud password (chimwe chinhu chakaoma), tinogona kuenda kuGoogle injini yekutsvaga uye nyora "Ndarasa foni yangu". Kana Google yangotiratidza pamepu pane yedu yakarasika mudziyo, tinogona kufona kana kuivharira kure. Sezvandambotaura pamusoro, kumisa sevhisi iyi isu tinofanirwa kungoisa chero Google application, yakadai seGmail, kuitira kuti sevhisi iyi iite otomatiki uye iko kushanda kuitise nzvimbo dzedu.
Parizvino iri basa nyowani rinenge richiwanikwa muUnited States chete, semuyedzo webvunzo, asi kana zvese zvikafamba nemazvo zvingangoita kuti munguva pfupi nyika dzasara dzichakwanisa kunakidzwa nebasa iri. Ramba uchifunga kuti iri basa nyowani rakanaka kwazvo mupfungwa asi rinopa Google nenzvimbo yedu nguva dzose, saka kuvanzika mupfungwa iyi kunotora chigaro chekumashure zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google ichatibvumidzawo kuti tiwane edu maIOS
Samsung Bhadhara chete inokwanisa kukunda vashandisi zviuru zvitanhatu mumaawa gumi nemaviri kuSpain
Nezuro iTunes, iCloud neApp Store zvakamira kushanda